Nbudata ngwungwu Ngwunye Ngwunye ikuku nke Airbus A330 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 111 768
Project Opensky Team, Thomas Ruth, ka Luis Quintero kwughachi
Nke a bụ nchịkọta zuru ezu nke A330 Models kere site na Thomas Ruth na VC. Nchịkọta a nwere -200, -200F, -MRTT na -300 dị iche iche nke A330. Biko mara ọkwa 2 kere site Project Opensky Team enweghị VC
The dum mkpọ nwere omenala soundsets maka General Electric CF6-80E1, Pratt & Whitney PW4000-100 usoro & apụta-Royce Trent 700 usoro engines. Nke a soundsets e kere site André Silva na Emil Serafino (ya ikike iji ya soundsets a nchịkọta).
A n'ụzọ zuru ezu dezie aircraft.cfg na omenala mere echiche na ibu-ụgbọala / jetway codes gụnyere. -Eso FMC, GPWS na ihe AutoBrake usoro kere site Garrett Smith, Jimmy Wong na Matt Smith, na Project Opensky karị.
Nke a mkpọ nwere 107 Good-Quality liveries ekesa n'ime anọ variants.
ỊDỌ AKA NA NTỊ, mkpọ olu 2 (A330-200 / 300 Project OpenSky) adabaghị 64bits ya na Prepar3Dv4 +, a gaghị etinye ya Prepar3Dv4 +
American ụgbọ elu (2 liveries)
(Mba P3Dv4 + na ọnweghị VC) :
House na agba (3 liveries)
Air Transat Mpịakọta 1:
(Mba P3Dv4 + na ọnweghị VC)
US Airways Mpịakọta 1:
Turkish Airlines Ibu
Onye edemede: Project Opensky Team, Thomas Ruth, ka Luis Quintero kwughachi
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX & P3D 3.05